Umaka: isikhathi » Martech Zone
Izinsizakalo ze-Amazon Web: Ikhulu kangakanani i-AWS?
NgeSonto, uDisemba 9, i-2018 NgeSonto, uDisemba 9, i-2018 Douglas Karr
Isikhathi sokufunda: 7 imizuzu Ukusebenza nezinkampani zobuchwepheshe, kuyangimangaza ukuthi bangaki abaphethe amapulatifomu abo ku-Amazon Web Services (AWS). INetflix, iReddit, i-AOL, nePinterest manje seziqala ukusebenza kumasevisi we-Amazon. Ngisho neGoDaddy ihambisa iningi lengqalasizinda yayo lapho. Ukhiye wokuthandwa yinhlanganisela yokutholakala okuphezulu nezindleko eziphansi. I-Amazon S3, ngokwesibonelo, yenzelwe ukuletha ukutholakala okungama-99.999999999%, kusetshenziswa izigidigidi zezinto emhlabeni jikelele. I-Amazon idume kakhulu ngamanani ayo anolaka
Misa Ukusho Ukuthi Ukunakwa Izikhala ziyancipha, Azikho!
Lwesibili, Disemba 23, 2014 Lwesibili, Disemba 23, 2014 Douglas Karr
Isikhathi sokufunda: 2 imizuzu Sikuthanda okuqukethwe okungadliwa okulula kakhulu njengomuntu olandelayo, kepha ngikholwa ukuthi kunombono oyiphutha omkhulu embonini yethu. Umbono wokuthi ukunakwa kwezikhala kuncipha kudinga umongo othile obekwe nxazonke zawo. Okokuqala, angivumelani neze nokuthi abantu basebenzisa amandla amancane ukuzifundisa ngokuzungeza isinqumo sabo esilandelayo sokuthenga. Abathengi namabhizinisi asebenzise isikhathi esiningi ngaphambi kokwenza ucwaningo asenza ucwaningo oluningi manje. Ngisebenzise imibiko yezibalo
Isikhathi sokufunda: <1 iminithi Anginasiqiniseko sokuthi bengizobiza le infographic ukuthi Ungayakha Kanjani Amaposi Aphelele; kodwa-ke, inakho ukucaciselwa okuhle kokuthi imiphi imikhuba emihle esebenza ekuvuseleleni ibhulogi yakho, amavidiyo nezimo zenhlalo online. Lokhu kungukuphindaphindwa kwesine kwe-infographic yabo edumile - futhi kuyengeza kubhulogi nakuvidiyo. Ukusetshenziswa kwezithombe, ukubizelwa esenzweni, ukukhuthazwa komphakathi kanye nama-hashtag kuyiseluleko esihle futhi kuvame ukunganakwa njengoba abathengisi besebenza nje ukusakaza okuqukethwe kwabo. Mina
Unxantathu Wokuthuthukiswa Kwewebhu
NgoLwesithathu, Novemba 6, 2013 NgoLwesithathu, Novemba 6, 2013 Douglas Karr
Isikhathi sokufunda: 2 imizuzu Zonke izinkontileka zethu namakhasimende ethu ziyizibopho eziqhubekayo zanyanga zonke. Kuyaqabukela siphishekela iphrojekthi engaguquki futhi cishe asikaze siqinisekise umugqa wesikhathi. Lokho kungazwakala kuthusa kwabanye kepha inkinga ukuthi inhloso akumele kube usuku lokukhishwa, kufanele kube yimiphumela yebhizinisi. Umsebenzi wethu ukuthola amakhasimende ethu imiphumela yebhizinisi, hhayi ukuthatha izinqamuleli ukwenza izinsuku zokwethulwa. Njengoba i-Healthcare.gov ifunda, leyo yindlela
Idatha Ephelele Akunakwenzeka
NgeSonto, uDisemba 23, i-2012 NgeSonto, uDisemba 23, i-2012 UCody Sharp
Isikhathi sokufunda: 2 imizuzu Ukumaketha esikhathini samanje kuyinto ehlekisayo; ngenkathi imikhankaso yokumaketha ngokusekelwe kuwebhu kulula kakhulu ukuyilandela kunemikhankaso yendabuko, kunolwazi oluningi olutholakalayo abantu abangakhubazeka ekufuneni idatha eyengeziwe nemininingwane eyi-100% enembile. Kwabanye, isikhathi esilondoloziwe ngokwazi ukuthola ngokushesha inani labantu ababone isikhangiso sabo esiku-inthanethi phakathi nenyanga ethile sinqatshiwe ngaleso sikhathi